23 Waxaa lagu taliyay Imtixaanaadka Shahaadada Onlineka ah ee Bilaashka ah 2022
23 Imtixaanada Shahaadiga ah ee Bilaashka ah ee lagugula taliyay
Qodobkaan, waxaan shaaca ka qaadnay 23 imtixaanno shahaado-bixinno oo bilaash ah oo bilaash ah oo si weyn loogu taliyay. Imtixaannadan ayaa laga jaray dhammaan qaybaha kala duwan ee daraasadda iyo xirfadda waxayna si xirfad leh u tijaabinayaan heerkaaga soo-gaadhista ee goobahan iyada oo la adeegsanayo caddeyn suurtagal ah marka si guul leh loo dhammaystiro.
Waxaad ku baratay injineernimada kombiyuutarka, maareynta mashruuca ama xirfado kale oo khadka tooska ah ah oo aadan helin shahaado?
Ha walwelin mar dambe, waxaad dhab ahaan qaadan kartaa imtixaan khadka tooska ah oo u dhigma xirfadaha aad ku soo baratay khadka tooska ah isla markaana aad ku heli karto shahaadadaada markii aad imtixaanka gasho oo aad ka gudubto calaamadda jarista ee loo baahan yahay si laguu caddeeyo.
Imtixaanada shahaadiga ah ee internetka waxaa bixiya shaqsiyaad si ay uga qeyb qaataan, laakiin baaritaankeyga kadib, waxaan ogaaday in ay jiraan runti imtixaano shahaado online ah oo bilaash ah oo shaqsiyaadka aysan ku bixin wax lacag ah imtixaanadan oo ay wali helayaan shahaadada lagama maarmaanka ah.
1 Maxay yihiin Faa'iidooyinka Shahaadada Internetka?
2 Ma jiraan wax caddeyn lacag la’aan ah?
3 Imtixaanada Shahaadiga ah ee Bilaashka ah
3.1 Imtixaannada Shahaadada Khadka Tooska ah ee Bilaashka ah ee aasaasiga ah ee Kumbuyuutarka
3.2 Imtixaanada Shahaadiga ah ee Ingiriisiga Naxwaha Bilaashka ah
3.3 Imtixaannada Shahaadiga ah ee Bilaashka ah ee Barnaamijka C Barnaamijka
3.4 Imtixaannada Shahaadada Internetka ee Bilaashka ah ee Sayniska Deegaanka
3.5 Imtixaannada Shahaadada Onlineka ee Anshaxa Bilaashka ah
3.6 Imtixaanka Shahaadada Khadka Tooska ah ee Awood Xisaabeed
3.7 Imtixaanka Shahaadeynta Khadka Tooska ah ee Dhaqaalaha
3.8 Imtixaanka Shahaadiga ah ee Bilaashka ah ee Barnaamijka Java
3.9 Maareynta Mashruuca Imtixaanka Shahaadeynta Khadka Tooska ah ee Bilaashka ah
3.10 Maareynta Xiriirka Macaamiisha (CRM) Imtixaannada Shahaadada Khadka Tooska ah ee Bilaashka ah
3.11 Imtixaanada Shahaadiga ah ee Microsoft Excel ee Bilaashka ah
3.12 Imtixaannada E-Suuqgeynta Bilaashka ah ee E-Suuqgeynta
3.13 Shabakadaha Kombiyuutarada Imtixaanada Shahaadiga ah ee Bilaashka ah
3.14 Imtixaannada Shahaadada Bilaashka ah ee Python
3.15 Imtixaannada Shahaadaynta ee Bilaashka ah ee Adeegyada Shabakadda Amazon (AWS)
3.16 Waraaqaha Qaloocinta Cascading (CSS) Imtixaannada Shahaadada Bilaashka ah ee Bilaashka ah
3.17 Imtixaannada Aqoonsiga Aptitude ee Bilaashka ah
3.18 Imtixaannada Shahaadada Bilaashka ah ee Sharciga Shirkadda
3.19 Imtixaanada Shahaadada Khadka Tooska ah ee Qiimeynta Qiimaha
3.20 Imtixaannada Shahaadooyinka Onlineka ee Bilaashka ah ee Ganacsiga
3.21 Hordhaca Koodh siinta bilowga ah Imtixaanada shahaadiga ah ee internetka
3.22 Imtixaanada Shahaadaynta Shabakada ee Naqshadeynta Webka
3.23 Hordhaca Imtixaannada Shahaado-bixinta Online-ka ah ee horumarinta Ciyaaraha
4 Imtixaannada Shahaadaynta ee Bilaashka ah ee Google
4.1 Aasaasiyada Imtixaanada Shahaadada Bilaashka ah ee Suuq-geynta Dijital ah
4.2 Gabagabada Imtixaanada Shahaadiga ah ee Bilaashka ah
4.3 Talo soo jeedin
4.3.1 12 Koorsooyinka Khadka Tooska ah ee ugu Fiican Suuq Geynta Shahaadooyinka 2020
4.3.2 13 Koorsooyinka Kombuyuutarka ee Khadka Tooska ah ee Bilaashka ah ee Shahaadada wata
4.3.3 30 Koorsooyinka Shahaadada Khadka Tooska ah ee Xirfadeed
4.3.4 13 Koorsooyinka Tababarka Tooska ah ee Ardayda iyo Shaqaalaha
4.3.5 Koorsooyin dhowr ah oo ku yaal magaalada Toronto oo bilaash ah oo lacag la'aan ah Koorsooyin Online ah
Maxay yihiin Faa'iidooyinka Shahaadada Internetka?
Waxyaabaha soo socdaa waa faa'iidooyinka ku yimaada qaadashada imtixaannada shahaadiga ah ee internetka;
Waa barnaamij ku saleysan khadka tooska ah, sidaas darteed, waxay leedahay dhammaan faa'iidooyinka barashada khadka tooska ah sida raaxada, dabacsanaanta, habboonaanta, is-barashada iskeed, iwm.
Helitaanka shahaadadaada internetka saameyn kuma yeelan doonto howlahaaga caadiga ah ee maalinlaha ah, si ka duwan sida ay imtixaannada dugsiga caadiga ahi u saameeyaan howlaha kale ee ardayga.
Shahaadada aad heshay waxay ku siineysaa aqoonsi waxa aad ka qaban karto shaqaalaha sidaas darteed waxaad ka heshay faa iido dadka isku shaqada ah.
Shahaadadaadu waxay qaabayn doontaa xirfaddaada waxayna kuu tilmaami doontaa halka aad u socoto ee xiga.
Shahaadada khadka tooska ah waa tan ugu dhaqsaha badan, uguna fudud ee lagu kasban karo shahaado haddii looga baahan yahay kuwa aad u shaqayso inay mid helaan.
Shahaadadu waxay ka dhigeysaa astaantaada xirfadeed, sida CV ama Resume, mid rafcaan u leh loo shaqeeyayaasha.
Waad baran kartaa waxkasta oo aad rabto ama aad ubaahantahay inaad barato iyadoo qayb ka ah mashruuc weyn oo aad ka shaqeyneyso welina laguu aqoonsado
Waxaad fursad u leedahay inaad hesho mushahar kordhin ama lagu dallaco goobtaada shaqada.
Waa loo heli karaa qof walba shahaadaduna waxay kaa dhigeysaa inaad ka soo baxdo tartanka.
Ma jiraan wax caddeyn lacag la’aan ah?
Haa, waxaa jira shahaadooyin bilaash ah oo aad ku baran karto koorsada internetka oo aad ku heli karto shahaadadaada. Qaar baraha internetka u fidiyaan adeegyadan shaqsiyaadka xiisaynaya.
Iyada oo loo marayo maqaalkan, akhristaha sharafta lahow, waxaad ku ogaan doontaa imtixaanadan shahaadiga ah ee bilaashka ah ee bilaashka ah ka dibna sii wad inaad qaadatid mid ka mid ah imtixaannada u dhigma xirfadahaaga oo aad hesho shahaadadaada. Ugu dambeyntii si sax ah ayaa lagugu aqoonsan karaa xirfadahaaga iyo wax kastoo ay tahay waad sameyn kartaa.
Imtixaanada Shahaadiga ah ee Bilaashka ah
Baadhitaan badan kadib, waxaan awooday inaan ururiyo imtaxaanadan shahaadiga ah ee shahaadiga ah ee khadka tooska ah ee bilaashka ah oo ay weheliyaan faahfaahintooda iyo isku xidhka arjigooda. Aniga oo aan ku sii dheeraan, ayaan taxanayaa;
Imtixaannada Shahaadada Khadka Tooska ah ee Bilaashka ah ee aasaasiga ah ee Kumbuyuutarka
Ma leedahay xirfado aasaasi ah kumbuyuutar oo aad rabto inaad hubiso aqoonta aad u leedahay duurka? Kadib qaado imtixaankan shahaadiga ah ee bilaashka ah, aasaaska kombiyuutarka, kaas oo ku siinaya inaad ku tijaabiso aqoontaada fikradaha aasaasiga ah ee kombiyuutarka imtixaanka waxaa sidoo kale ku jira qaar ka mid ah su'aalaha la xiriira barnaamijka iyo nidaamka software.
Imtixaanku wuxuu noqon doonaa Ingiriisiga imtixaankuna sidoo kale wuxuu ku yimaadaa qaab su'aalo xulashooyin badan leh wuxuuna daboolayaa dhinacyada soo socda aasaasiga ah ee software-ka, aasaasiga qalabka, barnaamijka softiweerka, softiweerka codsiga iyo aragtida badan ee keydka macluumaadka.
Waqtiga Imtixaanka: 20 daqiiqo
Wadarta Su'aalaha: 20
Dhibcaha gudbinta: 60%
Imtixaanada Shahaadiga ah ee Ingiriisiga Naxwaha Bilaashka ah
Haysashada xirfadaha naxwaha Ingiriisiga waxay ka dhigan tahay inaad si fiican uga fahmayso luqadda Ingiriisiga, maadaama aad awoodid inaad ku hadasho oo aad dhisto jumlado qalad la'aan. Maxaad u qaadan weyday imtixaanka shahaadiga ah ee naxwaha Ingiriisiga ee bilaashka ah oo aad noqotaa mid la caddeeyey, shahaadada goobta ayaa kaa caawin doonta inaad kaa sareysiiso kuwa kale oo leh isla shaqooyinka isla shaqada shaqaalaha.
Imtixaanku wuxuu ka koobnaan doonaa mowduucyada sida naxwaha Ingiriisiga fikradaha aasaasiga ah, saacadaha naxwaha Ingiriisiga, falalka, dhisidda jumlada iyo aqoonsiga qaladka. Inaad ku guuleysato inaad ka gudubto calaamadda la gooyey waxay kaa heli doontaa shahaado.
Imtixaannada Shahaadiga ah ee Bilaashka ah ee Barnaamijka C Barnaamijka
Ku hel shahaado C Programming adoo qaadaya imtixaanka bilaashka ah ee khadka tooska ah, kaas oo tijaabiya fikradahaaga iyo aqoontaada wax ku oolka ah ee duurka. Musharrixiinta doonaya inay galaan imtixaankan ayaa sidoo kale laga filayaa inay ku dalbadeen C Barnaamijyada dhowr jimicsi oo la xiriira.
Imtixaankani wuxuu dabooli doonaa mawduucyada C Barnaamijyada sida noocyada xogta iyo is-beddelka, shaqooyinka, hordhaca C, qaababyada, jaangooyooyinka iyo tilmaamayaasha, bayaannada shuruudda leh iyo wareegyada, hawlwadeennada iyo taxanaha baxsiga.
Imtixaannada Shahaadada Internetka ee Bilaashka ah ee Sayniska Deegaanka
Ka hel shahaado sayniska deegaanka fudeydka iyo raaxada gurigaaga adoo qaadanaya imtixaankan oo tijaabinaya awoodaada duurjoogta ah, qaabkan waxaad ku tusineysaa shaqsiyaadka lagama maarmaanka ah, sida loo shaqeeye, inaad ku fahamtay fikradda aasaasiga ah ee sayniska deegaanka adiga shahaadada.
Mawduucyada laga hadlayo imtixaankan ayaa ah kheyraadka dabiiciga, deegaanka, kala duwanaanshaha noolaha iyo ilaalintiisa, wasakheynta deegaanka, arrimaha bulshada iyo deegaanka. Ka gudub jarista oo u hel calaamadda la aqoonsan yahay ee khibraddaada.
Imtixaannada Shahaadada Onlineka ee Anshaxa Bilaashka ah
Imtixaankani wuxuu ka kooban yahay dhowr su'aalood oo xulashooyin kala duwan ah kuwaas oo ku saleysnaan doona aasaaska aasaasiga ah ee anshaxa ganacsiga iyo ku guuleysiga ka gudubka buundada imtixaanka loo baahan yahay waxay kaa heli doontaa shahaado duurka ku jirta.
Shakhsi ahaan anshax ganacsi oo la aqoonsan yahay, xirfadahaaga iyo aqoontaada waxaa raadin doona ururo ganacsi oo kala duwan maxaa yeelay waxaad ogtahay waxay ka caawin kartaa ganacsiyada inay koraan xad ka baxsan. Hesho shahaadadaada anshaxeed ee ganacsiga maanta oo ku sii jir tartanka shaqaalaha.
Imtixaanka Shahaadada Khadka Tooska ah ee Awood Xisaabeed
Dhaqaalaha, suuq geynta iyo waaxaha kale ee ganacsiga badiyaa waxay ubaahan yihiin shaqsiyaad xirfad uleh xisaabta shaqooyinka, waxaa laga yaabaa inaad xirfad uleedahay cilmiga xisaabta laakiin yaa aqbali kara taas adigoon tusin cadeyn? Aad u yar ama midna.
Tani waa fursad aad ku heli karto shahaado kartidaada xisaabeed adoo qaadanaya imtixaanka shahaadada khadka tooska ah ee bilaashka ah ee Awoodda Xisaabta iyo ka dhigista astaantaada xirfadeed mid rafcaan leh. Xusuusnow aagaggan maxaa yeelay waxay noqon doonaan mowduuca laga hadlayo imtixaanka: saamiga, dulsaarka fudud, xawaaraha iyo masaafada, xisaabinta, silsiladda xukunka, aagga iyo tirooyinka.
Imtixaanka Shahaadeynta Khadka Tooska ah ee Dhaqaalaha
Dhaqaaleyahan hubiye inuu yaqaana sida loo sameeyo ganacsi horey usocodka maadaama ay leeyihiin xirfadaha lagama maarmaanka u ah iyo aqoonta lagu dabaqi karo, laakiin dhaqaaleyahano shahaado haysta ayaa leh xirfadahan waxaana caan ku ah shahaadadooda saxda ah.
Tani waa waqtigii aad ku tijaabin lahayd xirfadahaaga dhaqaalaha adoo qaadanaya imtixaanka shahaadada internetka ee bilaashka ah ee Dhaqaalaha, ku gudub dhibcaha imtixaanka loo baahan yahay oo aad u hesho shahaadadaada si aad ugu muujiso loo shaqeeyayaasha inaad tahay shahaado oo aad si fiican uga baratay aagga daraasadda.
Mawduucyada lagu soo koobayo imtixaankan ayaa ah macaashka macaamiisha, falanqaynta dalabka, dabacsanaanta baahida, fikradaha qiimaha, saadaalinta dalabka iyo aasaaska dhaqaalaha.
Imtixaanka Shahaadiga ah ee Bilaashka ah ee Barnaamijka Java
Barnaamijyada Java waxaa aad u raadsada ururada teknolojiyadda iyo shirkadaha maadaama ay xirfad ku leeyihiin barnaamijyada, websaydhka iyo noocyada kala duwan ee barnaamijyada kombuyuutarka ku shaqeeya.
Tijaabi xirfadahaaga barnaamijyada Java adoo qaadanaya imtixaankan khadka tooska ah oo bilaash ah oo kasbo shahaadada si aad u muujiso inaad taqaanid fikradaha iyo sidoo kale aqoonta wax ku oolka ah ee ka dambeysa goobta. Aasaaska aasaasiga ah ee Java, noocyada xogta, wax ka beddelka marin-u-helka, qaababka ururinta iyo kuwa kaleba waa mowduucyo lagu dabooli doono barnaamijka shahaadada bilaashka ah ee barnaamijka Java-ka.
Maareynta Mashruuca Imtixaanka Shahaadeynta Khadka Tooska ah ee Bilaashka ah
Maamulayaasha mashruuca waxaa si aad ah u raadsada ururada maadaama ay xirfad u leeyihiin qorshaynta guusha, maaraynta iyo fulinta mashaariicda khuseeya urur. Maadaama aad xirfad ku leedahay maareynta mashruuca, halkan waxaa ku yaal fursad aad ku qaadan karto imtixaanka, aadna ku aflaxi karto dhibcaha loo baahan yahay oo aad ku heli karto shahaado.
Shahaadadaada maaraynta mashruuca, waxaad kahelaysaa faa iido badan dadka leh isla shaqadaada shaqada, waxaad heli kartaa mushahar kordhin ama dallacsiin. Imtixaanku wuxuu dabooli doonaa mowduucyada maaraynta mashruuca sida farsamooyinka qiyaasta, wareegga nolosha mashruuca iyo barnaamijyada maareynta mashruuca.
Maareynta Xiriirka Macaamiisha (CRM) Imtixaannada Shahaadada Khadka Tooska ah ee Bilaashka ah
Shakhsiyaadka ku xeel dheer xiriirka macaamiisha ayaa looga baahan yahay urur kasta iyo shirkad ganacsi si loo abuuro loona dhiso isdhexgalka macaamiisha / macmiilka.
U qaad xirfadaada heerka xiga adoo qaadanaya imtixaanka CRM iyo helitaanka shahaado ka turjumeysa xirfadahaaga ku saabsan mowduuca, sidaas darteed kaa dhigaya qof aqoon u leh shaqo kasta oo laga bixiyo arimahan.
Mawduucyada lagu daboolayo imtixaanka shahaadada internetka ee CRM waa nidaamyada CRM, barnaamijka CRM, falanqaynta ganacsiga CRM, howlaha muhiimka ah ee CRM iyo kuwa kale.
Imtixaanada Shahaadiga ah ee Microsoft Excel ee Bilaashka ah
Imtixaankani wuxuu daboolayaa mowduucyada shaqooyinka tirooyinka, shaqooyinka qoraalka, waraaqaha shaqada, aasaasiga MS excel, iyo safka, tiirka, howlaha unugyada. U diyaari naftaada inaad gasho imtixaankan si aad u tijaabiso xirfadahaaga iyo aqoontaada Microsoft Excel oo aad u hesho shahaadadaada.
Shahaadadaada Microsoft Excel waxay ka tarjumaysaa xirfadahaaga mawduuca waxaadna xitaa aad uga dhex aqoonsan kartaa shaqaalaha loo-shaqeeyahaaga sidoo kale waxaad ka faa'iideysanaysaa inaad hesho mushahar kordhin ama dallacsiin.
Imtixaannada E-Suuqgeynta Bilaashka ah ee E-Suuqgeynta
Haddii aad aqoon ku leedahay qaybtan daraasaddan waxaad sidoo kale fahmi lahayd inay sidoo kale la mid tahay Suuqgeynta Internetka. Xirfadaha suuq-geynta internetka waa wax laga naxo, waxaad u shaqeyn kartaa qof kasta oo ka socda raaxada gurigaaga oo lacag ayaa lagu siinayaa, laakiin markaa, si loo ballaariyo saldhigga macaamiisha waa lagama maarmaan inaad haysato shahaadada duurka.
Shahaadadaada 'Suuqgeynta' E-Suuqgeynta waxay ka dhigeysaa macaamiisha inay ku sii raadiyaan si ka badan sidaasna ay u ballaariso saldhigga macaamiishaada xitaa waxay kaa dhigeysaa inaad lacag badan ka qaaddo adeegyadaada. Shahaadadaada ayaa si guud loogu soo bandhigi doonaa boggaaga warbaahinta bulshada si ay macaamiisha u arkaan una xaqiijiyaan xaqiiqadaada.
U diyaari naftaada imtixaanka maaddaama mowduucyadan la dabooli doono: eray-bixinnada suuq-geynta emaylka, dul-marinta suuq-geynta internetka, 7 Cs ee suuq-geynta internetka iyo SEO.
Shabakadaha Kombiyuutarada Imtixaanada Shahaadiga ah ee Bilaashka ah
Ma leedahay aqoon teori ah oo wax ku ool ah oo ku saabsan Shabakadaha Kombuyuutarada? Markaa kani waa fursaddaada inaad imtixaan gasho oo aad ka noqoto shahaado duurka si aad u muujiso qof kasta oo u baahan xirfadahaaga inaad ku takhasustay qaybtaas waxbarasho.
Imtixaanku wuxuu dabooli doonaa mawduucyo shabakado kombiyuutar oo kala duwan kuwaas oo ka mid ah isku dhufashada, borotokoolka, lakabka gaadiidka, lakabka jirka, muuqaalka guud, moodellada shabakadda, iwm. Ogaanshaha mawduucyadan ayaa kaa caawin doona inaad si fiican isugu diyaariso imtixaanka oo aad u gudbiso dhibcaha loo baahan yahay si aad u kasbato Shahaadada Shabakadaha Kombuyuutarkaaga .
Imtixaannada Shahaadada Bilaashka ah ee Python
Python waa nooc ka mid ah luuqadda barnaamijka kumbuyuutarka dadka badidooduna xirfad ayey ku leeyihiin arimahan laakiin ma haystaan ​​shahaado ay ku muujinayaan.
Si kastaba ha noqotee, imtixaankan shahaadiga ah ee bilaashka ah ayaa halkan loogu talagalay inaad ka qaybqaadato oo aad kasbato shahaado si aad uga tarjunto awoodahaaga Python. Mawduucyo badan ayaa lagu daboolayaa imtixaanka waxaana ka mid ah magacyo isbedelaya, noocyo lambarro ah, barnaamijyo shaqeynaya, dhaxal, qaabka qalooca, maaraynta ka reebnaanta, iwm. Ogaanshaha mowduucyadan ayaa kaa caawin doona inaad si wanaagsan ugu diyaar garowdo imtixaannada oo aad u gudubto dhibcaha loo baahan yahay si aad u kasbato shahaadadaada Python.
Imtixaannada Shahaadaynta ee Bilaashka ah ee Adeegyada Shabakadda Amazon (AWS)
Waa inaad tixgelisaa inaad u hesho shahaado aqoontaada iyo xirfadahaaga Adeegyada Websaydhka ah ee Amazon adoo qaadanaya imtixaankan shahaadiga ah ee bilaashka ah ee internetka, imtixaan ku siinaya caddeyn markaad ka qayb qaadatid oo aad ka gudubto dhibcaha ugu yar ee loo baahan yahay.
Musharrixiinta waa inay xoogga saaraan mowduucyadan si ay u dhaafaan, daruuriga AWS, xogta AWS, shabakadda AWS, borotokoolka AWS, AWS CloudFront iyo aasaaska AWS.
Waraaqaha Qaloocinta Cascading (CSS) Imtixaannada Shahaadada Bilaashka ah ee Bilaashka ah
CSS waa luuqad barnaamij kumbuyuutar ah laakiin waxaan qiyaasayaa inaad taas ogtahay mar hore maadaama aad xirfad ku dhex leedahay laakiin maahan inay halkaas ku dhammaato, horay u sii soco horumarkaaga xirfaddaada adoo qaadanaya imtixaan shahaado online ah oo bilaash ah oo ku siin doona fursad aad ku hesho CSS shahaadada.
Musharrixiinta waa inay xoogga saaraan mowduucyada soo socda ee imtixaanadooda; CSS ee qoraalka iyo miisaska, margin iyo suufka, CSS ee loogu talagalay asalka, CSS Id iyo fasalka.
Imtixaannada Aqoonsiga Aptitude ee Bilaashka ah
Imtixaanka shahaadada khadka tooska ah ee bilaashka ah ee caqli gal ah ayaa ku jira qaab su'aalo dhowr ah oo xulashooyin ah oo daboolaya mowduucyada qaarkood sida caqliga aasaasiga ah, xisaabinta, dhibaatooyinka taxanaha ah, cilaaqaadka iyo dhibaatooyinka xaaladaha.
Ogaanshaha aagagga mowduuca su'aasha ayaa kaa caawin doonta inaad si wanaagsan ugu diyaar garowdo imtixaankaaga shahaadeynta waadna gudbin kartaa oo shahaadadaada ku heli kartaa berrinka.
Imtixaannada Shahaadada Bilaashka ah ee Sharciga Shirkadda
Tan waxaa sidoo kale loo yaqaan karaa sharciga ganacsiga ama sharciga ganacsiga waana qaybta daraasadda ee si sharci ah u xukunta xuquuqda, xiriirka iyo dhaqanka dadka, shirkadaha, ururada, iyo ganacsiyada. Haddii aad leedahay aqoonta iyo xirfadaha arimahan maxaad ugu dhaqaaqi weyday oo aad uga qayb qaadan lahayd imtixaanka shahaadiga ah ee internetka oo aad ku kasbatay shahaadadaada.
Si aad si fudud uga dhigto diyaarinta imtixaankaaga mowduucyada ku saabsan qeexitaanka iyo nooca shirkadeed, isku dabaridka iyo kala dirista shirkadda, heshiisyada ururka, sameynta shirkad iyo noocyada shirkadda, qodobbada ururka iyo rajada.
Imtixaanada Shahaadada Khadka Tooska ah ee Qiimeynta Qiimaha
Hore u sii qaado xirfadahaaga xisaabinta adoo helaya shahaado ka hadli doonta xirfadahaaga shaqo-bixiyaasha adoo qaadanaya imtixaanka shahaadiga ah ee bilaashka ah ee xisaabinta internetka.
Mawduucyada lagu daboolayo imtixaanka xisaabinta kharashka ayaa aasaas u ah xisaabinta kharashka, kala soocidda kharashyada, xisaabinta caatada ah iyo xisaabinta qiimaha iyo xisaabinta maaliyadeed.
Imtixaannada Shahaadooyinka Onlineka ee Bilaashka ah ee Ganacsiga
Noqo ganacsade shahaado haysta adoo qaadanaya imtixaanka shahaadiga ah ee bilaashka ah ee khadka tooska ah ee internetka ah halkaasoo aad ku tijaabin karto xirfadahaaga iyo aqoontaada maadada isla markaana kasbato shahaado kadib markaad ka gudubto buundada imtixaanka ee loo baahan yahay.
Inta lagu guda jiro barashada imtixaanka, musharrixiinta waa inay diiradda saaraan mowduucyada hal-abuurnimo sida ilaha raasamaalka, maareynta iyo kobcinta ganacsiga, raasumaalka aan rasmiga ahayn iyo raasamaalka, suuqgeynta, qorsheynta abaabul iyo maaliyadeed, iyo joojinta howlaha.
Hordhaca Koodh siinta bilowga ah Imtixaanada shahaadiga ah ee internetka
Tani dhab ahaan maahan imtixaan shahaadeysan oo bilaash ah, waa koorso bilaash ah oo khadka tooska ah lagu barayo sireedka dadka bilowga ah kadibna waxay helayaan howlo ku kasbanaya iyaga shahaado bilaash ah.
Koodhintu waa xirfad ay raadinayaan shirkadaha tiknoolajiyada iyo ururadu waana tan fursad kuu ah inaad ku dhex quusato bilowga bilawga, halkaas oo aad ka baranayso HTML, CSS iyo horumarinta websaydhka oo aad ka helaysid shahaado dhammaystirka.
Imtixaanada Shahaadaynta Shabakada ee Naqshadeynta Webka
Tani waa xirfad kale oo dijitaal ah oo aad loo raadinayo maalmahan ka dib oo waxay kaa caawin doontaa wax badan oo raalli gelin ah haddii aad iska qorto koorsadan oo aad baraneyso xeerarka, fikradaha iyo aad ku kasbato xirfadaha si aad u abuurto naqshado muuqaal ah oo lagu dabaqi karo webka -hadal ku saleysan.
Kadib markaad ku guuleysato koorsada, oo waliba ay kujirto gudbinta kedis kasta oo lagugu tuuro, waxaad heli doontaa shahaado.
Hordhaca Imtixaannada Shahaado-bixinta Online-ka ah ee horumarinta Ciyaaraha
Waad la yaabi doontaa xaddiga dakhliga ee horumarka ciyaaruhu abuuro maaddaama oo ay tahay bini-aadamku iyaga oo horumariya taas oo macnaheedu yahay inay helaan lacag badan. Gali adduunka horumarinta ciyaarta, ka bilow aasaasiga si aad ugu fiicnaato xirfadda oo aad u hesho shahaado markaad dhammayso koorsada.
Imtixaannada Shahaadaynta ee Bilaashka ah ee Google
Kuwani waa imtixaannada tooska ah ee tooska ah ee ay bixiso Google ee bixiya caddayn dhab ah ka dib markii murashaxu uu qaato imtixaanka oo uu ka gudbo dhibcaha imtixaanka loo baahan yahay.
Aasaasiyada Imtixaanada Shahaadada Bilaashka ah ee Suuq-geynta Dijital ah
Qaado imtixaankan shahaadiga ah ee bilaashka ah ee ay bixiso Google si aad ugu tijaabiso xirfadahaaga aasaasiga aasaasiga ah ee suuqgeynta dhijitaalka ah. Kahor intaan musharixiintu qaadan koorsada waxaa lasiiyaa fursad ay ku bartaan bilaash kadib taas oo ay hada ka qayb qaadan karaan imtixaanka si ay u kasbadaan shahaadada.
Aasaasiga u ah suuq geynta dhijitaalka waa mid ka mid ah kuwa loogu doon doonista badan yahay xirfadaha dhijitaalka ah, inaad yeelato aqoonta aasaasiga ah iyo shahaado aad ku muujineyso waxay kaa caawin doontaa kobcinta xirfadaada, inaad shaqo cusub hesho ama aad ku dalacsiiso goobtaada shaqada.
Halkaas waxaad ku haysataa dhammaan faahfaahinta imtixaannada shahaadiga ah ee bilaashka ah ee internetka si kor loogu qaado xirfadahaaga iyo xirfaddaada iyada oo loo marayo shahaadada la bixiyay.
Gabagabada Imtixaanada Shahaadiga ah ee Bilaashka ah
Haysashada shahaado sax ah waxay si weyn u kordhin kartaa fursadahaaga inaad ku dallacdo, koror mushahar ah, shaqo helid, ama inaad bilowdo xirfad cusub oo guuleysata. Had iyo jeer waad ku soo lifaaqi kartaa shahaadooyinkan CV-gaaga ama Resume maxaa yeelay waxay kaa dhigeysaa mid u muuqda rafcaan badan waxayna kaa dhigeysaa inaad xirfadle u tahay shaqo-bixiyeyaasha waxayna ku siinayaan sumcad aad ku dhex leedahay asxaabtaada.
Helitaanka shahaado waxay muujineysaa loo shaqeeyeyaasha inaad faham cad ka haysato aagga daraasadda aad ku xeel-dheer tahay sidaasna ku go'aamineyso booskaaga urur ama shirkad.
Had iyo jeer waad ku soo shuban kartaa shahaadadaada (shahaado) barahaaga bulshada, sida LinkedIn, haddiiba ay dhacdo in fursad la helo iyada oo loo marayo habkaas marwalba waa lagaala soo xiriiri karaa si aad u siiso adeegyadaada.
13 Koorsooyinka Tababarka Tooska ah ee Ardayda iyo Shaqaalaha
Koorsooyin dhowr ah oo ku yaal magaalada Toronto oo bilaash ah oo lacag la'aan ah Koorsooyin Online ah
imtixaanada shahaadiga ah ee bilaashka ahimtixaannada shahaadiga ah ee bilaashka ah ee googleshahaadooyinka khadka tooska ah ee bilaashka ahimtixaanada shahaadiga ah ee internetka
Previous Post:11 Dariiqo Oo Lagu Helo Shahaadada Dhaqtarka Lacag La'aanta Ah Ee Fiqiga
Post Next:10 Deeqaha Shahaadada Sare ee Ugu Fiican Kanada ee loogu talagalay Ardayda oo dhan
Bob wuxuu leeyahay,
December 21, 2020 at 6: 04 pm
Ilaa hadda inta aan sheegi karo, shahaadooyinka qaybta waxbarashadu maaha shahaadooyin rasmi ah. Tusaale ahaan, kuwa Microsoft kama yimaadaan Microsoft.